"Hoygiibaa iga dheer", buugga ay qortay Judith Tebbutt - BBC News Somali
"Hoygiibaa iga dheer", buugga ay qortay Judith Tebbutt
Image caption Judith Tebbutt
Judith Tebbutt waxa iyada iyo ninkeedii hore looga afduubay dalka Kenya bishii September ee 2011-kii, waxan madaxfurasho loogu haystey dalka Soomaaliya gudihiisa muddo lix bilood ah. Haatan waxay qortay buuggan ay u bixisay "Hoygiibaa iga dheer."
Judith Tebbutt iyo ninkeedii David, waxa laga afduubay xeebta Lamu ee dalkan Kenya, iyaga oo dalxiis ah, waxana lala aadey gudaha dalka Soomaaliya. David waxa la diley wax yar ka bacdi afduubkaasi, waxana la sheegay inay dileen kooxihii qafaashay. Haweeneydii Judith waxa iyana la sii haystey muddo lix bilood ah, waxana aakhirkii la soo daayey bish March ee 2012. Qoyskani waxay ahaayeen qoys Ingiriis ah, waxayna degganaan jirtey Judith oo ay ku soo noqotay magaaladeedii oo ah Bishop's Stortford, oo ku taal gobolka HertfordShire.
Markii ay ku soo noqotay dalkan Ingiriiska, ayaa Judith waxay bilawday qoritaanka buuggani oo af-Ingiriiska lagu yidhaa "Long Walk Home", waxayna kaga sheekaynaysaa waayo-aragnnimadeedii iyo noloshii ay soo martay intii loo haystey afduubka ee ay ku xidhnayd Soomaaliya.
Image caption Judith iyo ninkeedii David
Waxa kale oo Judith ay sheegtay inay ula jeeddo buuggeegani in uu farriin iyo dhambaallo gaadhiisyo dadka kale ee weli la-haystayaasha ah meel kasta adduunka, gaar ahaanna Soomaaliya, dhambaalkaas oo ah "in aanay lumin rajada iyo hiigsiga ah inay ka bixi karaan dhibaatada ay ku jiraan".
Judith waxa kale oo ay kaga sheekaynaysaa buugga sidii foosha xumayd ee kooxihii qafaashay ay ula dhaqmi jireen iyo noloshii adkayd ee soo martay. Waxayna mar kasta ka fikiri jirtey inay samaysato qorshe iyo maararrow, waxayna isku mashquulin jirtey "In aan gurigii la igu dhex hayey saacado badan dhex lugeeyo gudihiisa, isla markaasina aan tiriyo inta tallaabo ee aan qaaday".
Sheekada buuxda ee Judith Tebbutt waxad ka heli kartaa Six Months in Captivity ee BBC World Service